दशैं तिहार मनाउन आउने व्यक्ति अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने निर्णय ! – live 60media
दशैं तिहार मनाउन आउने व्यक्ति अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने निर्णय !
तनहुँमा स्वदेश तथा विदेशबाट चाडपर्व मनाउन घर आउने व्यक्ति १४ दिनसम्म अनिवार्य क्वा’रेन्टिनमा बस्नु पर्ने भएको छ ।
जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले जिल्लामा को’रोना सं’क्रमणको जो’खिम कायमै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व मनाउन आउने व्यक्ति अनिवार्य १४ दिन क्वा’रेन्टिनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गल बरालले जानकारी दिए ।
सहायक प्रजिअ बरालले भने, ‘चाडपर्वमा स्वदेश तथा विदेशबाट धेरै सर्वसाधारण जिल्ला फर्किने हुँदा को’रोना संक्र’मणको जो’खिम बढ्ने कायमै छ । तसर्थ, घर फर्किनेहरुको वडास्तरसम्मै तथ्यांक राख्ने र अनिवार्य क्वा’रेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीयस्तरमा गठन भएका अनुगमन समितिलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ ।’
पीसी आर परीक्षणको रि पोर्ट ने गेटिभ लिएर आउने व्यक्तिहरु भने क्वा रेन्टिनमा बस्नु नपर्ने सहायक प्रजिअ बरालले बताए ।
काठमाडौँ जिल्लामा १ हजार १७८ सहित काठमाडौँ उपत्यकामा एकैदिन १ हजार ५३१ को रोना सं क्रमित थपिएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा ४८४ महिला र ६९४ पुरुषमा को रोना सं क्रमण पुष्टि भएको हो ।त्यस्तै भक्तपुरमा ४९ महिला र ५४ पुरुषसहित १०३ संक्रमित थपिएका छन् । अर्को जिल्ला ललितपुरमा ११४ महिला र १३६ पुरुषसहित २५० जनामा को रोना सं क्रमण पुष्टि भएको छ ।
नेपालमा बितेको २४ घण्टामा देशभर २ हजार ४४० सं क्रमित थपिएको जानकारी दिएको छ । अब नेपालमा को रोना सं’क्रमितको संख्या ८९ हजार २६३ पुगेको छ ।
त्यस्तै नेपालमा थप १९ जना को रोना संक्रमितको मृ त्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा को रोनाबाट ज्या न गुमाउनेको संख्या ४४५ पुगेको छ ।त्यस्तै एकैदिन १ हजार १३३ जनाले को रोनालाई जितेका छन् । अहिलेसम्म को रोनालाई जित्नेको संख्या ६५ हजार २०२ छ ।अहिले नेपालमा २३ हजार ५०७ जनामा स क्रिय सं क्रमण छ । उनीहरु संस्थागत तथा हो म आ इसोलेसनमा छन् ।
← एक मिसकलले जुर्‍यो बिहे, ६० वर्षीया बेहुलीलाई २० बर्षे दुलाहा……
नौ महिना देखि नक्कली प्रहरी निरीक्षकलाई सक्कली प्रहरीले सलाम ठो’किरहे, यसरी खुल्यो रहस्य →